‘प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको छ, तर म त्यो रेसमा छैन’ - Janasewa News
प्रकाशित : २० जेठ ,२०७९
श्रोत : अनलाईनखबर
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि दलको ध्यान आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनतिर गएको छ । ठिक यही बेला सत्ता गठबन्धन नै अघि बढ्छ या यो भत्किएर अर्काे पुनः वाम गठबन्धन बन्छ भन्नेतर्फ धेरैको चासो देखिन्छ ।
पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कांग्रेसमा पनि अहंकार बढे एमाले जस्तै बनाइदिने चेतावनी दिएपछि आगामी चुनाव र त्यसअघिकै राजनीतिक उछलकुदबारे बहस सुरु भएका छन् ।
पछिल्लो राजनीति, गठबन्धनको भविष्य र वाम गठबन्धनको संभावनाबारे अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
२०७४ सालको निर्वाचन पश्चात् तपाईं प्रधानमन्त्री त हुनुभएन । तर बालुवाटारमा तपाईंको आवतजावत धेरै नै भयो । त्यहाँ खास त्यस्तो के छ ?
२०७४ सालको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भयो । म त्यो (नेकपा) पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाता र त्यही पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको नाताले बालुवाटारमा जान आवश्यकता भयो, जानै पर्थ्यो ।
अदालतले नेकपालाई दुइटा अलगअलग पार्टी बनाइदिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र बनाइसकेपछि हामीले फेरि गठबन्धन बनाउने परिस्थिति तयार भयो । गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारमा सहभागी एउटा महत्वपूर्ण दल भएकाले पनि बालुवाटार जानुपर्ने भयो । गठबन्धन निर्माणमा निर्णायक जस्तै भूमिका खेलेको हुनाले बालुवाटार जानु मेरो आवश्यकता भई नै हाल्यो । किनकि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सधैं खुमलटार बोलाउने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री निवासमा जाने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । त्यसकारण बालुवाटार आउने–जाने कार्य बाक्लै भयो ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिकामा भएकाले हो, हिजो माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा कांग्रेसले अहंकार देखायो भने एमालेलाई झैं ठेगान लगाइदिन्छु भन्नुभएको ?
त्यसरी त्यही भावमा त मैले भनेको होइन । मैले दुई-तीन कुरा भन्न खोजेको थिएँ । एउटा, मेरो मुख्य भनाइ गठबन्धन टुट्दैन भन्ने हो । गठबन्धन अहिले कायम छ, कायम रहन्छ । तर, गठबन्धनभित्रको कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखा परेको छ । त्यसबाट दम्भ र अहंकार पनि देखिने पो हो कि ! भन्ने हामीलाई चिन्ता छ । यो दोस्रो विषय राखेको हुँ ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्नुुस्, निर्वाचन गराउनुस् भन्न मान्छेहरू आउँछन् नि ! तर मैले भनेको छु, गठबन्धन छोड्दिनँ
तेस्रो, केपी ओलीमा जुन दम्भ र अहंकार देखिएको थियो, त्यस्तो अहंकार कांग्रेसमा नदेखियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । कांग्रेस पनि ओली जस्तै नहोस् भन्ने चाहन्छौं । हिजो दुई-दुई पटक आफैं प्रस्तावक बनेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ । पछि त केपी ओली छोइखानु भएनन् । माओवादी छ जस्तो पनि गर्दैनन्, प्रचण्ड पनि नेता छ भन्ने जस्तो पनि गर्दैनन् । संविधान नै मिच्ने कार्य गरे । कांग्रेस पनि त्यस्तै नहोस् भनी सावधान गराउन खोज्या हो मैले ।
त्यसो भयो भने के भन्ने प्रश्न त त्यहाँ आउँछ । तर गठबन्धन केही हुँदैन, अघि जान्छ भनेर सुरुमा पनि भनेको छु, अन्त्यमा पनि भनेको छु । प्रदेश, संघको निर्वाचन र त्यसपछि पनि जान्छ, तर हामी कोही पनि अहंकारी र दम्भी बन्नुहुँदैन ।
हिजो एमालेलाई ठूलो बनाउनुभयो, आज कांग्रेसलाई । हिजो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो, आज शेरबहादुर देउवालाई । तपाईं अरूलाई ठूलो पार्टी वा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने फ्याक्टर मात्रै हो कि भन्ने आशंका छ । आफ्नै पार्टी बलियो बनाउनेतिर चाहिं सोच्नुभएन कि ?
पार्टी त छँदैछ । २०७४ को निर्वाचन र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जनताले हामीलाई त्यही भूमिका दिएका छन् । मैले पार्टीलाई माया वा वास्ता नगरेर भन्ने त होइन नि ! आफ्नै पार्टी बलियो बनाउन त म लागेकै छु ।
निर्वाचनमार्फत तिमीहरू पनि एउटा शक्ति हो, कांग्रेस र एमालेलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ है भन्ने जनादेश प्राप्त भएको छ । कांग्रेस वा एमालेलाई सँगै लिएर देशमा स्थिरता ल्याऊ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर लैजाने भूमिका जनताले दिएका छन् । भूमिकै यही छ भने अरू कसरी गर्ने ?
तपाईंकै भाषामा भन्दा कांग्रेस र एमालेलाई खबरदारी गर भनेर जनताले दिएको जनादेशलाई तपाईंले बार्गेनिङ टुल बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
बार्गेनिङ टुल बनाएकै छैन नि ! बार्गेनिङ टुल बनाउन खोजेको भए २०७४ को निर्वाचनपछि म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्थें । प्रधानमन्त्री मुख्य होइन, जनता मुख्य हो भनेर प्रधानमन्त्री बनिनँ । जनतासँग जे प्रतिबद्धता गरियो, त्यसप्रति नैतिक रूपले कायम रहन बाध्य छु । मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन भन्या होइन मैले ? यो त सबैलाई थाहा छ नि !
अहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्नुुस्, निर्वाचन गराउनुस् भन्न मान्छेहरू आउँछन् नि ! आएका छन् । तर मैले भनेको छु, गठबन्धन छोड्दिनँ । संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र राष्ट्रियताको रक्षा निम्ति गठबन्धन बनाइयो, यसको आवश्यकता अहिले पनि छ । मलाई प्रधानमन्त्री चाहिंदैन अहिले पनि भनिरहेकै छु । त्यसैले मैले बार्गेनिङ गरें भन्ने प्रश्न कहाँबाट आउँछ ? मैले ‘सेक्रिफाइस’ गरेको किन मिडियाले भन्न चाहँदैन ? अनौठो त्यो लाग्छ ! प्रचण्डले ‘सेक्रिफाइस’ गरेको हुनाले केपी पनि तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डले ‘सेक्रिफाइस’ गरेकाले अरू पार्टीका पनि नेताहरू प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रचण्डलाई सजिलो हुन्छ, उसैलाई बनाउने त गर्दै आउनुभएको होला नि ?
मलाई मात्रै सजिलो बनाउने भन्ने होइन । मलाई मात्रै सजिलो खोज्ने भए त आफैं प्रधानमन्त्री बन्थें नि ! देशलाई सजिलो कसरी हुन्छ ? के गर्दा संविधान र प्रणालीको रक्षा हुन्छ ? जनतालाई कताबाट राहत दिन सकिएला भन्ने चिन्ता न हो मेरो । हिजो वाम गठबन्धन गर्दा राजनीतिक स्थिरता यताबाट आउला भन्ने सोचेर न गरेको हो । कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि विकास, शान्ति, स्थिरताका लागि हो । मेरो निम्ति त मैले गठबन्धन बनाएको होइन । जनताले यही भूमिकासम्म गर है भन्दासम्म त म यही गर्छु ।
अहिले तपाईंलाई एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको हो ?
नआएको होइन, प्रत्यक्ष–परोक्ष कुराहरू आइरहेकै छन् । तर म एकदम क्लियर छु, अहिले प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन, जसरी हिजो पनि थिइनँ । वाम गठबन्धनको बेलामा पनि मलाई अफर आउँदा सरी ! अहिले प्रधानमन्त्री हुन्न भनेको हुँ । अहिले पनि भन्न आउनेलाई धन्यवाद, तर सरी भनिराख्या छु ।
यही गठबन्धनबाटै अघि जान्छु, उहाँ (देउवा)कै नेतृत्वमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । विकास र स्थायित्व नै चाहेको छु ।
तर राजनीति २०७४ को स्थानीय चुनावपछि जस्तै छ । दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूबीच भइरहेका संवादले एमाले र माओवादी फेरि वाम गठबन्धनतिर जान्छन् कि भन्ने आकलन पनि हुन थालेको छ । त्यस्तो होइन र ?
अहिले त्यस्तो होइन । माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतले भन्दैछु, अहिले त्यस्तो होइन । अहिले गठबन्धन कमजोर पार्ने कार्य देशको हितमा हुँदैन । एमालेको मूल नेतृत्वले आत्मालोचना गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने वा गल्ती भयो भन्ने कहीं कतै संकेत देखिएको छैन । यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन छोडेर अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर हामी छैनौं । यो द्विविधा नराख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
स्थानीय चुनावमा ठाउँ–ठाउँमा एमालेसँग मिलेर माओवादीलाई कमजोर पार्न त कांग्रेसले पनि खोज्यो । फेरि पनि त्यस्तै गर्नुभयो वा कांग्रेसले माओवादीलाई लखेट्नैपर्छ भन्ठान्यो भने त्यो बेलाको परिस्थिति के होला भन्न सकिंदैन । किनकि, राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल पनि भनिन्छ, असम्भव भन्ने केही हुँदैन ।
राजनीति दिशाहीन र अराजक हुन्छ भन्ने पनि होइन । देशको आजको आवश्यकता भनेको यही गठबन्धन हो । यो गठबन्धन अझ बलियो होस् भन्ने चाहन्छु । तर हिजो एमालेमा जस्तो अहंकार कांग्रेसमा नआइदेओस् भन्ने चिन्ता मात्र हो मेरो । अध्यक्षलाई अपमानित गर्ने, ह्युमिलिएट गर्ने कार्य गरेको हो नि हिजो केपी ओली प्रवृत्तिले । त्यस्तै कांग्रेस नभइदेओस् भन्या हो ।
यता अहंकार भए अर्कोतिर गयो, अर्कोतिर अहंकार देखिए यता फर्कियो, तपाईंहरूलाई सजिलो छ है ?
यो हामीलाई किन भन्नुहुन्छ ? कांग्रेस पनि उतापट्टि अप्ठ्यारो परे माओवादी खोज्दै आउने हो, अरूलाई पनि अप्ठ्यारो परे माओवादी खोज्दै आउँछन् । त्यो भन्नुस् न बरु !
वाम गठबन्धन इमानदार भएर गरें, इमानदार भएर नै केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ । तर केपी ओलीको संविधान विरोधी क्रियाकलापले गठबन्धन आवश्यकता भयो । शेरबहादुर देउवाजीलाई तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस्, हामी सहयोग गर्छौं भनें । सहयोग गरिराखेकै छु, गरिराख्छु । आफ्नो लागि त मैले खोजिनँ नि !
कांग्रेसको भोट माओवादीलाई ट्रान्सफर कमै भएको छ । सिट बढे पनि मतदाता १७ बाट घटेर १३ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवस्था प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि देखिएला । यस विषयमा के सोच्नुभएको छ ?
लेफ्ट–लेफ्टबीच जति सजिलो ‘भोट ट्रान्सफर’ हुन्छ, कांग्रेससँग अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने बुझेकै कुरा हो हामीले । अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा पनि अनुभव गरेको कुरा हो ।
तर अहिले चाहिं पहिलेको भन्दा प्रगति भएको छ । कांग्रेसको ठूलो संख्याले हँसिया हथौडामा सहजै ढंगले भोट हालेका छन् यो पटक । माओवादीले पनि तुलनात्मक रूपमा सहज ढंगले हालेका छन् । प्रदेश र संघसम्म पुग्दा यो त देश, लोकतन्त्रका लागि आवश्यकता रहेछ भन्ने कांग्रेसका समर्थक, शुभेच्छुकले बुझ्छन्, माओवादीकाले पनि बुझ्छन् । भोट ट्रान्सफर हुन अझ सजिलो हुँदै जाला ।
हिजो संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा लिएर जान पनि कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य आवश्यक बन्न गयो । आज शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पनि दुई पार्टीको सहकार्य बढी स्वाभाविक र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
उसो भए स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को परिणाममा तपाईं सन्तुष्ट हो ?
चुनावको परिणामबाट म असन्तुष्ट चाहिं छैन । हुन त योभन्दा बढी नै अपेक्षा गरेका थियौं । गठबन्धन ठिक ढंगले काम गरेको भए, तलसम्म यसलाई प्रशिक्षित गर्न सकेको भए माओवादी केन्द्र दोस्रो बन्न सम्भव छ भनेर अगाडि बढेका थियौं । केही हाम्रै कमजोरी र गठबन्धनलाई व्यवस्थित रूपमा तलसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारणले सोचेको जति त आएन । फेरि पनि म सन्तोषजनक नै ठान्छु यसलाई ।
२०६४ मा पहिलो पार्टी भएको माओवादीले अब फेरि पहिलो हुने कल्पना गर्न समेत छाड्यो, जनताले पत्याएका कार्यकर्तालाई नेतृत्वले पत्याएन भन्ने छ नि ?
ठिकै छ, हामी त्यसको पनि समीक्षा गर्दैछौं । कोही ठाउँमा उम्मेदवारी ठिक ढंगले दिन नसक्दा राम्रो परिणाम आएको छैन । कति ठाउँमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई समयमै हल नगर्दा परिणाम राम्रो आएको छैन । कोही ठाउँमा जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिन नसकेकाले परिणाम हाम्रो पक्षमा आएको छैन, धेरै कारण छन् ।
तर राजनीतिको हिसाबले हामी एक नम्बरमै छौं अहिले पनि । परिवर्तनको बाहकको हिसाबले हामी एक नम्बरमै छौं । यसलाई नम्बरमा परिणत गर्ने, संख्यामा परिणत गर्ने र देशको नेतृत्व गर्ने कुरामा पक्कै पनि हाम्रा कमजोरी छन् ।
एजेन्डा मात्रै प्रगतिशील भएर नहुने रहेछ …
एमालेको मूल नेतृत्वले आत्मालोचना गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने वा गल्ती भयो भन्ने कहीं कतै संकेत देखिएको छैन । यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन छोडेर फेरि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर कहीं कतै छैन
नहुने रहेछ ! जनतासँग सम्बन्ध, कार्यशैली आदि थुप्रै कुरा छन् । त्यसको समीक्षामा छौं । तर मेरो भनाइ के छ भने हामी एक नम्बर भएर मात्रै यो देशको कल्याण हुन्छ, माओवादी एक नम्बर नहुँदासम्म ‘जिकज्याक’ भइराख्छ ।
माओवादी केन्द्र एक नम्बर हुनुपर्छ पनि भन्ने, गठबन्धनको वकालत पनि गरिरहने । जसरी स्थानीय चुनावमा समयमा सिट बाँडफाँट नहुँदा अरूतिर ध्यान दिन पाउनुभएन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि हुने होला । यस्तो कचपच भइरहने हो भने त गठबन्धन संस्कार नै राम्रो होइन भन्ने देखियो, होइन ?
हो पनि, होइन पनि । हाम्रो संविधानले जस्तो निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ, एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना एकदमै कम छ । कहीं न कहीं संयुक्त सरकार या गठबन्धन अनिवार्य जस्तै बन्छ । अब या त निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्‍ यो, होइन भने गठबन्धनकै संस्कृतिमा जाउ भन्ने संविधानकै निर्देशन छ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो ।
अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता सबै एउटा पार्टी विशेषले लडाइँ पूर्णतः जितेर आएको होइन । विभिन्न विचार, राजनीति भएका पार्टीहरूबीच गठबन्धन गरेर, सहमति कायम गरेर, जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई कहीं न कहीं समायोजन गरेर आएको हो । त्यही कारणले गिरिजाबाबु, जो शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो, जति बेला पनि सहमति, सहकार्य र एकताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । १०/२० वर्ष यसरी नै जानुपर्छ नेपाल अनि मात्र विकास हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो ।
अहिले मैले पनि भन्ने गर्छु, सहमति, सहकार्य र समझदारी बनाएरै जानुपर्छ । गठबन्धनबाटै जानुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई डेलिभरी दिन गठबन्धन चाहिन्छ । संयुक्त सरकारको संस्कृति सबैले सिक्नुपर्‍यो । यो आजको आवश्यकता हो । सधैं यस्तो हुन्छ भन्ने छैन ।
२०५१-५२ सालयता त यस्ताको यस्तै छ नि ! एउटा सरकार ढाल्यो, गठबन्धन गरेर अर्को बनायो । गठबन्धनले कहिल्यै जनताको काम गरेको छ र ?
कतिपय बेला गठबन्धनले बिगार्‍यो पनि होला, तर गठबन्धनभित्र इमानदार भएर काम गर्दा नराम्रो गरेको छैन । के १२ बुँदे समझदारीले नेपालमा नराम्रो गर्‍यो ? बृहत् शान्ति सम्झौता पनि गठबन्धन नै हो नि ! त्यसले नराम्रो गर्‍यो ? संविधानसभा पनि गठबन्धन नै हो, नराम्रो गर्‍यो त ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि गठबन्धन गरेर नै घोषणा गरिएको हो, नराम्रो भयो त ?
समग्रमा भन्दा गठबन्धनले नै युगान्तकारी परिवर्तन गरेको छ, जनतामा आशा जगाएको छ । अब विकास, निर्माण र समृद्धि पनि गठबन्धनकै बलमा ल्याउन जोड गर्नुपर्छ ।
सँगसँगै को–कति इमानदार छ भन्ने पनि हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ । कसले गठबन्धनमा बसेर प्रधानमन्त्री वा सत्ता स्वार्थ मात्रै खोज्या छ ? को इमानदार रूपमा लोकतन्त्र र शान्तिको हितमा गठबन्धन गर्न चाहन्छ भन्ने त छुट्याउनुपर्‍यो नि !
तपाईंले छुट्याइसक्नुभयो होला है ?
छुट्याइरा’ख्या छु नि !
तपाईंले बनाउनुभएको प्रधानमन्त्रीमध्ये को चाहिं इमानदार रहेछ ?
प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे इमानदार हो । हुने इमानदार भए-भएनन् तपाईंहरूले ख्याल गर्नुहोस् ।
झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो, केपी ओलीलाई बनाउनुभयो । अहिले शेरबहादुर देउवालाई बनाइराख्नुभएको छ । को चाहिं गठबन्धन, शान्ति, लोकतन्त्र जस्ता उपलब्धिप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने त खुट्याउनुभयो होला नि ?
गठबन्धन गरेर या कसैलाई नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्न खोज्नुको मनसाय बुझ्नुपर्‍यो क्या ! माधवजी (संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा) दुई ठाउँमा लडेर नि जित्न सक्नुभएको थिएन । त्यति कारणले उहाँको भूमिका नहुने त हुँदैनथ्यो । मैले संसदमा प्रवेश गराएँ । पहिला संविधान बनाउँदाको अनुभव पनि छ, एमालेको नेता पनि हो । १२बुँदे समझदारीदेखि गणतन्त्रको आन्दोलनसम्म उहाँले नेतृत्व गरेको व्यक्ति संविधानसभामा हुँदा संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्ला भनेर नै ल्याएको त हो मैले । अरू त माधवजीबाट मैले पाउनु के थियो र त्यतिबेला ? संविधान छिटो र राम्रो बनोस् भन्ने उद्देश्य थियो ।
झलनाथजीलाई बनाउँदा पनि नयाँ परिस्थिति बन्यो । धेरै खालका दबाव थिए, त्यो कथा मैले अहिले भन्दिनँ ।
केपीजीलाई किन बनाएँ त ? संविधान बनाउनु थियो । संविधान फेरि पनि नबन्ला कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र फैलिएको थियो । मैले नजिकबाट हेर्दा केपीजीलाई प्रधानमन्त्री दियो भने संविधान बन्ने देखें । सुशीलजीले कुरा बुझ्नुभएन । मैले त तपाईं राष्ट्रपति हुनुहोस्, केपी प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, संविधान चाहिं बनाउँ भनेको थिएँ । यसो भन्नु प्रचण्डको गल्ती हो र ? मैले त देशलाई एउटा गति दिने प्रयास पो गरेको थिएँ ।
दोस्रोचोटि वाम गठबन्धन भयो । वाम गठबन्धन गरौं भन्न म आफैं गएको हो, अरू आएको होइन । देशमा वामपन्थी जनमत ठूलो छ, हामी एकै ठाउँमा भयौं भने राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि राम्रो हुन्छ भनेर गएको हो । यसो भन्दा सायद उहाँ मान्नुहुन्थेन । उहाँ त माओवादीलाई एकदम हेप्ने हो नि ! मैले तपाईं नै हो है भोलि प्रधानमन्त्री हुने भनें । त्यसपछि गठबन्धन पनि भयो, चुनाव पनि भयो । उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो ।
मेरो इन्टेन्सन त स्थायित्व र विकासकै निम्ति हो । गडबढ भएपछि मैले शेरबहादुरजीलाई तपाईं अगाडि बढ्नुपर्‍यो, नत्र संविधान खतरामा पर्ने भयो भनेकै हो । अहिले पनि भनिराखेको छु । शेरबहादुरजीप्रति मेरो कुनै नकारात्मक टिप्पणी छैन ।
संघीय निर्वाचन आउँदैछ । गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी बाहेक एकातिर एकीकृत समाजवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ । कसलाई के–के पद बाँड्नुभएको छ ?
कसैलाई केही बाँड्नु परेको छैन । शेरबहादुरजी आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ ।
सकेसम्म पाँचै दलबीच सबैतिर तालमेल होस् । हुन सकेन भने गठबन्धनभित्रका दलहरू जो–जो मिल्छन्, उनीहरूको बीचमा तालमेल होस् । त्यो पनि हुन सकेन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् । अहिले नै कसैलाई केही दिने भनेर भनेका छैनौं ।
चुनावपछि माधव नेपाललाई राष्ट्रपति, तपाईं र शेरबहादुर देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री भन्ने केही छैन ?
त्यस्तो केही भएको छैन । मैले मेरो तर्फबाट अहिले त्यस्तो कुरा गर्नुपर्ने ठानेको पनि छैन ।
पटक–पटक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले संसद विघटन भएको थियो । देश अराजकताको भुमरीमा पर्ने, चुनाव नै नहुने, फेरि निरंकुशतातिर जाने र वर्षौं लड्नुपर्ने भयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण नेपालको निम्ति केही हुँदैन भनेर हामीले दृढताका साथ संसद विघटन विरुद्ध सडक र सबैतिरबाट अभियान चलायौं । अन्ततः अदालतले पनि विघटनविरुद्ध फैसला दिएपछि परिस्थिति बच्यो ।
अर्को चोटि पनि त्यही हो । फेरि विघटन, फेरि त्यस विरुद्ध गठबन्धन । कोभिडले गर्दा दोस्रो चोटि सडकमा जान पनि गाह्रो थियो । गठबन्धन हाम्रो सहारा भयो, देशको सहारा भयो । त्यसैले पनि अहिले म त्यस्तो गर्ने पक्षमा छैन । कसलाई राष्ट्रपति, कसलाई प्रधानमन्त्री भनेर छलफल गर्न आवश्यक छैन । सबै मिलेर देश र जनतालाई मुख्य फाइदा हुने गरी निर्वाचन गरौं । निर्वाचनपछि जनताको मत के आउँछ, त्यसपछि सरकार कसको बनाउने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने छलफल गरौंला । संविधान बनाउने बेलाको जस्तो अहिलेदेखि बुकिङ गर्न आवश्यक ठानेको छैन, राम्रो पनि हुँदैन ।
तर स्थानीय चुनावमै भएको तामलेमप्रति गठबन्धनका दुई दल एकीकृत समाजवादी र जसपामा अलि असन्तुष्टि देखिन्छ । त्यो यहाँहरूलाई पनि अनुभूत भएको छ ?
हाम्रो नियमित छलफल भइराखेकै छ । चुनावपछि पनि पटकपटक मिटिङ बस्यौं । सुरुका दिनमा जति असन्तुष्टि थियो, अब त्यो छैन । केही ठाउँका आफ्ना टिप्पणी-आलोचना भए पनि एकीकृत समाजवादीका साथीहरू समग्रमा गठबन्धन इन्ट्याक्ट रहनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । माधवजीहरूमा मैले समस्या देखेको छैन ।
अहिले एकीकृत समाजवादीका साथीहरू भर्खर पार्टी बनेको, तलसम्म जान पनि नभ्याउँदै चुनाव आइहाल्यो । त्यसले गर्दा पनि भनेको जस्तो नहोला, तर गठबन्धनले उहाँहरूलाई फाइदा नै भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरको चुनाव, पोखरामा महानगरपालिकाकै प्रमुख जित्नुभयो । विना गठबन्धन त जित्ने अवस्था थिएन । अन्यत्र पनि गठबन्धनले फाइदा भएन भन्ने होइन । तर जस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो भएन भन्ने त हो । त्यसको त समीक्षा गर्न सकिन्छ ।
जसपाभित्र पनि सुरुमा अलिकति असन्तुष्टि देखिएको हो । तर उहाँहरू पनि गठबन्धनबाटै जानुपर्छ भन्नेमा नै हुनुहुन्छ ।
जनमोर्चा पनि अहिलेको अवस्थामा यताउता गर्नुहुँदैन भनेर मोहनविक्रमजीले नै भनिराख्नुभएको छ । त्यस कारण केही आलोचना र टिप्पणी हुन्छन् । त्यसको समीक्षा गरेर समाधान गरिन्छ । गठबन्धनमा अहिले कुनै समस्या छैन, सहज ढंगले जान्छ ।
के भनेर सम्झाउनुभयो त ?
केही साथीहरूले गठबन्धनबाट फाइदा लिनुभएको छ । गठबन्धनको कुरालाई खण्डन पनि गरिराख्नुभएको छ । मैले बुझ्न सकेको छैन ।
सम्झाउने भनेको छलफल गर्ने त हो । हामीलाई पनि कतिपय ठाउँमा चित्त दुखेको छ, तपाईंहरूलाई पनि दुखेको छ । तर हामीले नेपाली कांग्रेससँग समेत बसेर यसबाट शिक्षा लिएर आउने दिनमा करेक्सन गर्ने भन्नेमा सबै सहमत छौं ।
समीक्षा त अर्को पनि गर्नुभयो होला नि ! जस्तो कि कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा गठबन्धनप्रति जति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, अर्को खेमा त स्थानीय तह निर्वाचनमा नै गठबन्धन नगर्ने भन्दैथिए । त्यो प्रतिनिधिसभामा झन् चर्को गरी आउँछ होला नि ?
शेरबहादुरजी र उहाँ वरिपरिको टीम चाहिं गठबन्धनप्रति दृढ छ र इमानदार पनि देख्छु । तर केही साथीले गठबन्धनबाट फाइदा पनि लिनुभएको छ, गठबन्धनको खण्डन पनि गरिराख्नुभएको छ । यो मैले बुझ्न सकेको छैन ।
हिजो गठबन्धन बन्दै गर्दा केही नेताहरूले भन्नुभयो, माओवादी हात्तीको कानमा चमेरो । कति हेपेर भनेको त त्यो ? अहिले पनि एक जना नेताले त गठबन्धन नगरेको भए योभन्दा बढी जित्थ्यो कांग्रेसले भन्नुभएछ । मैले कांग्रेसमा अहंकार देखियो भनेर शेरबहादुरजी र उहाँको टीमलाई भन्दा पनि त्यो प्रवृत्तिलाई भनेको हुँ ।
एमसीसीबारे प्रचण्डले मुख खोले
एमसीसीबारे देउवा र प्रचण्डको पत्र तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् भीम रावल
कांग्रेस सभापती देउवाकोे जिकिर पार्टीको महाधिवेशन मेरो हातमा छैन
नेपाली कांग्रेसका नेता सिंहले भने कम्युनिष्ठहरुले जनतालाई भ्रम फैलाएर भोट माग्छन्
अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता चन्द्रागिरी क्षेत्रमा बसपार्क र सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने
प्रचण्डले भने एमसीससी पास गराउन अमेरिकालाई चिठी पठाएको छैन
नेकपा एमालेका नेता प्रभु साह रौतहट पुगेर गर्जिए राष्ट्रघाती एमसीसी रोक्नु पर्छ
केपी ओली लाई बाबुरामको चुनौती छोरी मानुषी बेलायत गएको पुष्टि गर्न अग्रह
बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ
मुख्य समचार, राजनीति
प्रधानमन्त्री देउवाद्धरा मन्त्रीपरिषद बैठको आव्हान
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री मा राजेन्द्र पाण्डेले पाए विस्वासको मत
पाँच दलिय सत्तारुढ बैठकको निर्णय राष्ट्रिय सभाको चुनाव मिलेर लड्ने सहमती
गठबन्धन बैठकको निर्णय रामचन्द्रको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र गठन
माओवादी केन्द्र बैठको निर्णय राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाण्डौँमा गर्ने